Daawo: Dowladda Sacuudiga Oo Bilaawday in Ay Dalkeeda Kasoo Tarxiisho Xoolaha Geela Ee Qadar Laga Leeyahay.
Thursday June 22, 2017 - 20:00:52 in Wararka by Super Admin
Khilaafka u dhaxeeya qaar katirsan dowladaha Khaliijka Carabta ayaa saameyn dhan walba ah ku yeeshay dadka iyo duunyada
Khilaafka u dhaxeeya qaar katirsan dowladaha Khaliijka Carabta ayaa saameyn dhan walba ah ku yeeshay dadka iyo duunyada .
Maamulayaasha Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ayaa ku dhaqaaqay go’aano ad-adag oo ciriiri gelinaya muwaadiniinta Qadar, Saudi Arabia ayaa amar kusiisay dhammaan dadka Qadar kasoo jeeda in ay wadanka isaga baxaan waxayna soo rogtay hareerayn dhanka barigga badda iyo Hawada ah.
Hareereynta ayaa saameysay xoolaha ladhaqdo sida geela iyo Ariga iyadoona Saraakiisha Sacuudiga ay soo Eryeen kumanaan kun oo xoolo ah iyo dadkii dhaqanayay.
Arrinta layaabka leh ayaa ah in Dowladda Sacuudiga gaar ahaan waaxda socdaalka iyo Jinsiyadaha ay sharci darro ku tilmaamtay geela iyo Ariga daaqaya dhulka Sacuudiga ee xadbeenaadka kulaala!
Arrinkan ayaa dad badan ka yaabiyay markii Sacuudigu ay wadankooda ka tarxiileey 12,700 oo neef geel ah.
Geeljirayaal Qadariyiin ah oo lagasoo eryay Sacuudiga ayaa warbaahinta u sheegay in safar dheer oo boqolaal Kiilow mitir ay soo jareen islamarkaana ay dhibaatooyin kala kulmeen saraakiisha Sacuudiga.
Wasaaradda deegaanka iyo xoolaha xukuumadda Qadar ayaa sheegtay in calaf iyo biyo ay lagaartay xoolaha lagasoo tarxiilay dhanka dalka Sacuudiga waxayna ballan qaaday in ay daryeel ku fidin doonto xoola dhaqatada iyo xoolahooda.
Hoggaamiyaasha Sacuudiga iyo imaaraatka Carabta oo umuuqda kuwa ku kuwa fashilmay hareeraynta dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha dowladda Qadar waxaana lays weydiinayaa Qadar ma isku dhiibi doontaa kaligood taliyayaasha Boqorada Carbeed mise mowqifkeeda ayay ku adkeysan doontaa?.
4 Askari Oo Dowladda Imaaraatka looga Dilay Galbeedka Waddanka Yemen.